Period Calendar, Cycle Tracker 6.1.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.1.1 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
Application မ်ား ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ Period Calendar, Cycle Tracker
Period Calendar, Cycle Tracker ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကာလပြက္ခဒိန် - ရာသီလာခြင်း Tracker
ကာလပြက္ခဒိန်အမျိုးသမီးတွေကာလကိုခြေရာခံ, သံသရာ, မျိုးဥထွက်ခြင်း, မြေသြဇာကောင်းသောနေ့ရက်ကာလကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်တစ်ခုအလွန်ကြော့လွယ်ကူ-to-အသုံးပြုမှု application ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ, ဓတေားကလေးမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုထင်နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်ကာလသံသရာ၏ regularity, ကာလပြက္ခဒိန်ကူညီပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ tracker သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသည်နှင့်သင်လိုအပ်သမျှကမ်းလှမ်း: နောက်ကြောင်းခံလိုက်မမှန်ကာလ, အလေးချိန်, အပူချိန်, စိတ်ခံစားမှု, သွေးစီးဆင်းမှု, ရောဂါလက္ခဏာနှင့်ပိုပြီး။
သတိပညာသတိပေးချက်များကိုသင်အကြောင်းကြားနှင့်လာမည့်ကာလ, မျိုးဥထွက်ခြင်း, မြေသြဇာကောင်းသောနေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုပြင်ဆင်စောင့်ရှောက်လော့။
အဆိုပါပြက္ခဒိန်မွေးဖွား, မျိုးဥထွက်နှင့်ကာလကိုခန့်မှန်းမှာကြီးလှ၏။ ဒီ app ကိုသင့်သံသရာသမိုင်းမှ adapts နှင့်တိကျစွာသင်စိတ်ဝင်စားသောသော့ကိုရက်ပတ်လုံးခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ပြက္ခဒိန် home page ကိုအပေါ်တစ်ဦးတစ်ချက်မှာသင်လိုအပ်သမျှကိုကြည့်ပါ။
ကာလပြက္ခဒိန်ပြက္ခဒိန်မျက်စိ prying မှလြှို့ဝှကျသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, စကားဝှက်သော့ခတ်ထားနိုင်ပါတယ်ဆုံးသင့်ပုဂ္ဂလိကကိုဒေတာ-ကာကွယ်ပေးသည်။
လွယ်ကူသော backup လုပ်ထား device နှင့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်အစားထိုးဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးဖို့သင့်ရဲ့ဒေတာ၏ restore ။
ကာလ tracker, ဂဏန်းပေါင်းစက်နှင့်ပြက္ခဒိန်
- သင် Non-မြေသြဇာ, မြေသြဇာကောင်းသော, မျိုးဥထွက်, မျှော်မှန်းထားသည်ကာလနှင့်ကာလရက်ပတ်လုံးမြင်ယောင်နိုငျသညျ့အလိုလိုပြက္ခဒိန်
- ပြက္ခဒိန်, သံသရာနဲ့ settings တွေကိုလျင်မြန်စွာဖွင့်ကျောထောက်နောက်ခံနဲ့ပွနျလညျထူထောငျနိုငျသညျ။ သင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်ဒေတာဆုံးရှုံးဖို့မကြောက်ဘယ်တော့မှမ
- ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုလိုသိကနျြးမာရေး tracker တစ်တစ်ချက်မှာအလှနျအရေးကွီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေး
အသေးစိတ်ခြေရာခံ နှင့် Daily သတင်းစာကာလမှတ်တမ်း
- နေ့စဉ်ပြက္ခဒိန်စီမံသင်သည်စီးဆင်း, လိင်ဆက်ဆံမှု, ရောဂါလက္ခဏာတွေ, စိတ်ခံစားမှု, အပူချိန်, အလေးချိန်, ဆေးပညာ, PMS, အခြားဒိုင်ယာရီမှတ်စုအပေါ်အချက်အလက်တွေကို save ပေးနိုင်ပါတယ်
- လာမည့်ကာလအတွက်အသိပေးချက်များ, ကလေးမွေးဖွားပြတင်းပေါက်သို့မဟုတ်မျိုးဥထွက်
- တမူထူးခြားတဲ့ PIN ကုဒ်သုံးပြီးသင့်ရဲ့ကာလပြက္ခဒိန်ကာကွယ်ပါ
အမြဲတမ်း tracker နှင့်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်အချက်အလက်များ
- သင့်ပြက္ခဒိန်ပေါ် Track ကာလအချက်အလက်များနှင့်မျိုးဥထွက်နိမိတ်လက္ခဏာများ
- လတ်ဆတ်တဲ့စတင်ရန် tracker ဒေတာ Reset
- က Settings အပိုင်းအတွက်ကာလခန့်မှန်းကြားကာလ Adjust
- luteal အဆင့်အရှည် Adjust
- (တနင်္လာနေ့သို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေ) ကထုံးစံ "ရက်သတ္တပတ်၏ပထမဦးဆုံးနေ့" အပေါ် tracker Start
နေကြပြီးမှ mode ကို နှင့် ကာလ tracker
- ဖျောက်မျိုးဥထွက်, မွေးဖွားနှင့်ကူးလူးဆက်ဆံခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဒေတာ
- ဤမိန်းကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်စုံလင်သောကာလ tracker ပြက္ခဒိန် Make
ကြော့နှင့်ခေတ်မီဆန်းပြား, ပဲသူငယ်ချင်းကြိုက်နှစ်သက်သော! ဤသည်အလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက်ကာလ tracker နှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းပြက္ခဒိန်တိုင်းမိန်းမသည်စုံလင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာလပြက္ခဒိန်ယနေ့အခမဲ့ Download လုပ်!
Period Calendar, Cycle Tracker အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Period Calendar, Cycle Tracker အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Period Calendar, Cycle Tracker အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Period Calendar, Cycle Tracker အား အခ်က္ျပပါ
linaki စတိုး010
Period Calendar, Cycle Tracker ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Period Calendar, Cycle Tracker အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.1.1
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://privacy.period-tracker.com/simpleinnovation/period-calendar/privacy-policy-en.pdf
App Name: Period Calendar, Cycle Tracker
လက်မှတ် SHA1: 77:C2:84:83:F2:43:B6:95:B3:9A:8B:F9:0B:55:BA:DA:95:C1:F6:1C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Larisa Berce
Period Calendar, Cycle Tracker APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ